Espaina: Adihevitra Ara-politika sy Ara-tsosialy Mafana Momba ny Fanitsiana ny Lalampanorenana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Septambra 2011 4:30 GMT
Vakio amin'ny teny English, македонски, Italiano, Português, Español
Nihahenjana kokoa ny adihevitra politika sy sosialy tao Espaina nandritra ny volana vitsivitsy farany teo. Ny vaovao farany niteraka indray dia fidinan'olona anarivony an-dalambe mba hanohitra izay lazaina fa #reformazo (#fanitsianalehibe). Mikasika ny fanovana isankarazany ao amin'ny Lalampanorenena Espaina novolavolain'ny PSOE (Antokon'ny Mpiasa Sosialista Espaniola) izany, miaraka amin'ny fanohanan'ny PP (Antokon'ny Vahoaka) –fanovana natao telo volana monja mialoha ny fifidianana amin'ny ankapobeny, mandritra ny vaninandro mafana, tsy misy fampilazana ho an'ny vahoaka akory na ny vondrona kongresy hafa, ary tsy nandrenesana na dia adihevitra kely fotsiny aza eo amin’ ireo antoko politika tompon-kevitra amin'ny fanovana..
Ny andininy voatondro dia ny faha 135 mikendry ny famerana ny fandaniam-bola-panjakana noho ny krizy ara-toekarena ankehitriny, izay efa fehezin'ny lazaina fa tsenam-bola sy ny sanda miaka-midina avy any Eoropa amin'ny ampahany.
Novakiana tahaka izao ny lahatsoratra ao amin'ny andinin'ny faha 135 ao amin'ny Lalampanorenana Espainola:
Tsy maintsy hajain'ny governemanta rehetra ny kirakira rehetra hampitombina ny tetibola.
Tsy mahazo miantoka ny fatiantoka raiki-tapisaka mihoatra noho izay voafaritry ny Vondrona Eoropeana ho an'ny mpikambana ao aminy na ny fitondrana federaly na ny vondrom-paritra Mizaka Tena. Ny Lalampanorenana no mamaritra ny fandaniam-bola be indrindra voafaritry ny lalàna ho an'ny governemanta federaly sy ny Vondrom-paritra mizaka tena ho toy salan'isan'ny ny harinkarena faobe PIB. Tsy maintsy mampiseho tetibola voalanjalanja ny governemanta ao an-toerana.
Tsy maintsy omen'ny lalàna alalana ny fitondrana federaly sy ny Vondrom-paritra mizaka tena vao mahazo mivarotra taratasin-trosa na mitrosa.
Niompana tamin'ny lohahevitra roa ny adihevitra, ny politika sy ny sosialy.
Avy ao amin'ny Antoko Sosialista ihany no misongadina adihevitra politika , tahaka ireo loholona misolo tena ao amin'ny kongresy sy ny sekretera jeneralin'ny Vaomieran'ny Mpiasa (sendikà lehibe indrindra ao Espaina), Antonio Gutiérrez, izay nanambara fa tsy hirotsaka hofidiana intsony raha mbola manohy ny politikany amin'izao fotoana izao ny Antoko Sosialista, izay maka fanapahan-kevitra manakaiky ny an'ny antoko ankavanana neoliberaly. Tsarovy ao an-tsaina ny fanitsiana farany nataon'ny sendikà nampian'ny fitondrana sosialista.
Sary avy amin'ny @anderinaki http://yfrog.com/j22muhj
Etsy ankilany dia nisy ny hetsi-panoherana manerana ny firenena nomanin'ny Fivorian'ny Puerta del Sol amin'ny ampahany ary ampian'ny Hetsika 15M manontolo manohitra ny lazain'ny “Real Democracy Now!” ho Fanonganam-panjakana Ara-Bola.
Tamin'io andro io ihany dia nihahenjana ny fifanenjahana teo amin'ny polisy efa mora tezitra sy ny mpanao gazety.
acampadasol: Nifanarahana alakamisy ny teny tarigetra: “Tsia amin'ny fanitsiana ny Lalampanorenana. Miala ny baikon'ny tsena sy ny renivola.” #AGSol
Fanitsiana hampita ny hoavin'ny firenena any amin'ny fahaverezan'ny tombotsoa ara-tsosialy manoloana ny famarotana ho an'olo-tsotra ny orinasam-panjakana (privatisation) sy ny politika liberaly amin'ny endriny itateran”ilay mpanao gazety Iñaki Gabilondo azy..
Ny 2 Septambra, neken'ny Kongresy ny fanitsiana ny Lalampanorenana, ka 316 ny loholona nanaiky ary 5 no nandà. Ny Ankavia Tafaray (Izquierda Unida), isoloan'i Gaspar Llamazares tena dia nisafidy ny hanao veto ny fifidianana mba tsy hahazo tombony avy amin'ny fanohanan'ny vondrona politika Catalan CIU, izay heveriny fa porofon'ny tanjany ara-politika ny safidiny, ny marimaritra iraisan'ny PSOE sy ny PP.
Juan_Nadie: Gaspar Llamazares manohitra ny fanitsiana Lalampanorenanan [#reformazo] (#bigreform) ary manohana ny fitsapan-kevibahoaka: Lahatsoratra sy lahatsary wp.me/p1IvYw-dc
Tamin'ny 7 Septembra, nankatoavin'ny Antenimiera-doholona ny fanovana, tamin'ny alalan'ny latsabato 233 manaiky ary 3 manohitra.
LL_Sosa: RT @pepvilar #Senate nankato ny fanovana ny lalam-panorenana tamin'ny latsabato 233 manohana ary 3 mitsipaka// mampalahelo, tena andro mampalahelo…
Na dia izany aza, toerana kely no hitan'ny olom-boafidy amin'ny adihevitra tahaka itony na dia amin'ny fanapahan-kevitra tahaka izao aza:
actuable: Vahoaka maherin'ny 141.000 no mitaky fifidianana fitsapa-kevi-bahoaka ankehitriny bit.ly/qckZTZ #yoquierovotar (#iwanttovote)